Bogga ugu weyn 21 Siyaabood Oo Lacag Looga Sameeyo New York (NYC) | Talooyin Aan La Faafin
Isha sawirka: ca.travelpulse.com
Waxaan dareemayaa in mowduuca maqaalkan laga beddelo 21 siyaabood oo lacag looga sameeyo New York loona beddelo "Fadlan ii sheeg sababta aadan lacag uga heli karin magaalada ugu weyn adduunka!"
In kasta oo qof kastaa uusan lacag ka samayn karin wax kasta, qof walba waa inuu awoodaa inuu lacag ka sameeyo wax. Maqaalkan waxaa lagu qoray hal ujeedo. Si lagaaga caawiyo inaad xoogaa lacag samaysato.
Like hees ka jiiddo DaddyAlbumkii ugu horreeyay ee istuudiyaha oo cinwaan looga dhigay “Waa Wax walba oo ku saabsan Benyaamiin, ”Waxay ku saabsan tahay benjamiinnada. Xitaa muranka yar ee ku xeeran heesta, sida ay tahay dhibka dad badan, waxay ku saabsan tahay benjamiinnada.
“Benyaamiin” waa lacag loogu talagalay. Waxay tilmaamaysaa sawirka Benjamin Franklin oo ku yaal biilka $ 100. Ma jiro qof reer New Yorker ah oo is-ixtiraamaya oo aan u baahnayn/jeclayn lacag ama garanayn waxa ay benjamiin yihiin.
Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa iftiinkiisa siyaabaha lacag looga sameeyo New York, iyo sidoo kale meelaha kale ee lacagta looga baahan yahay iyo meesha ay tani khuseyso.
Reer New York ayaa taas xaqiijinaya New Yorkk wuxuu helaa dhibcaha ugu sarreeya ee kala -duwanaanshaha iyo dhaqanka, iyadoo qiyaastii 91% dadka deggan magaalada ay yiraahdaan mar walba waxaa jira wax la arko ama la sameeyo. Tani waa calaamad aad u wanaagsan. Meelaha had iyo jeer nolosha ku qulqulaya ayaa calaamad wanaagsan u ah dadka maanka barwaaqaysan.
Hees mar walba loo isticmaalo in lagu bilaabo taxanaha telefishanka riwaayadaha dambiyada Mareykanka “NSer ”ee laga sii daayay shabakadda Starz wuxuu lahaa khadad wanaagsan oo ku saabsan New York oo aan aaminsanahay inay run yihiin.
Erayada heesta heesta furitaanka Awoodda oo cinwaankeedu yahay “Magaalo Weyn oo Taajir ah” ayaa sidan u socota;
“Waxay dhahaan kani waa magaalo weyn oo hodan ah, haa, haa
Aniguna waxaan ka imid qaybta ugu saboolsan, oh
Nalal dhalaalaya, nolosha magaalada, waa inaan sameeyaa
Tani waa halka ay hoos ugu dhacdo, haa (haa, haa)
Kaliya waxaan u imid inaan si adag u soo baxo (aad u soo kac)
Sharci ama sharci darro ah, cunug, waa inaan sameeyaa ”
Faahfaahin ka timid Genius ayaa ku sifeysay heestan sidan “In kasta oo mid kasta oo ka mid ah 25 -ka qof ee ku nool New York uu yahay milyaneer, haddana waxaa jira dad badan oo ku nool saboolnimo. Dadka ku dhasha koofiyadda guud ahaan waxay ku koraan agagaarka dembiyada waxayna aakhirka ku dhacaan falal sharci -darro ah si ay lacagtooda u helaan, ha ahaato iibinta maandooriye ama tuuganimo.
In kasta oo boqolleyda maalqabeennada ay sii kordhayaan, haddana tirada dadka saboolnimada ku nool ayaa iyana sii kordheysa - waxay u egtahay in kuwa hodanka ah ay sii hodan yihiin halka kuwa saboolka ah ay sii faqiirayaan. ”
Sidee u fududahay in lacag laga sameeyo New York - Tirakoobka?
Sida laga soo xigtay a Spear's daraasad joornaal oo qiimeysay 20 -ka magaalo ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Magaalada New York waxay ku jirtaa kaalinta 4aad.Waxa kale oo la sheegay in daraasaddu muujisay in 389,100 qof ay yihiin maalqabeenno ku nool magaalada New York.
Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in New York ay tahay "aasaaska hodanka kaliya maahan Ameerika, laakiin adduunka oo dhan."
21 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo New York
#1 - Ka caawi dadka kale inay sugaan shaqooyinka
Iyada oo heerka shaqo la’aanta maxalliga ahi ku dhowdahay 9%, shaqo -dooneyaasha ayaa si buuxda u buuxa. Taas macnaheedu waa in ay jiraan dad badan oo shaqo la’aani hayso oo u baahan shaqo.
Awooddaada inaad ku heshid hab aad ku kala sarraysiiso oo aad u socodsiiso shaqaalahan shaqo -doonka ah taas oo u oggolaanaysa loo -shaqeeyayaasha inay ka soo xushaan. Loo -shaqeeyayaasha doonaya in ay shaqaaleeyaan shaqaale yar iyo wixii ka sareeya, xilliga ku -meel -gaadhka ah, ayaa kaa dhigi doona joogitaankooda shaqo.
Tani waxay u baahan tahay inaad ogaato meesha aad ka heli lahayd shaqooyinkan oo macaamiishaadu ay lacag ku siin doonaan si aad u caawiso.
Kuwa ku soo biira kooxdaada waa in loo xaqiijiyaa shaqooyin haba yaraatee mar kasta oo ay mid u baahdaan.
#2 - Bixinta adeegyo
Waxaad adeegyo u fidin kartaa ganacsiyada yaryar ee ku jira qaybtaada New York (NYC) lacag yar.
Haddii aad ogaato inay jiraan waxyaalo u baahan meheraddo ka jira agagaarkaaga oo ay tahay inay si xad -dhaaf ah u bixiyaan si aad u hesho, oo aad ugu fidin karto adeegga lacag yar, iyo si joogto ah, markaa waad sii wadi kartaa oo soo gudbin kartaa soo -jeedinno.
Ogolaanshaha soo jeedimahaan ayaa go'aamin doona haddii laguu oggolaan doono inaad ganacsi la bilowdo. Kaliya waa inaad had iyo jeer isha ku haysaa meelaha wanaagsan ee suuqa ee u baahan buuxinta.
#3 - Ku adeegso tijaabo jees jees ah
Haddii aad xaq u leedahay inaad ku fadhiisato xeerbeegtida tooska ah, waxaad ka qayb qaadan kartaa mid la taaban karo. Waxaad iska qori kartaa si aad mid u noqoto websaytyada qaarkood oo bixiya gelitaannadaas, oo sug tilmaamaha.
Marka qareenku rabo inuu hubiyo godad kiisa, wuxuu samayn doonaa maxkamad jeesjees ah. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad dib u eegto dacwada oo kooban oo aad ka jawaabto su'aalo xukun oo taxane ah si aad uga caawiso garyaqaannada sharciga inay ogaadaan xoogga kiiskooda.
#4 - Isku diyaari
Soo dejinta shaqadaada ugu horeysa ee la dejiyay, si aad lacag uga hesho New York (NYC) way adkaan kartaa gaar ahaan haddii aadan garanayn meel aad ka bilowdo. Sii wad raadinta
Haddii aad u malaynayso inaad si fiican u dhaqmi karto oo aad lahaan karto waxyaabo dadku rabaan inay daawadaan, markaa wax waliba waa hagaag. Haddii aadan u malayn in dadku rabaan inay ku arkaan shaashadooda, markaa waxaad shaqo u heli kartaa xubin ka mid ah shaqaalaha filimka.
#5 - U sheeg sheekadaada
Ma jiraan sheekooyin murugo leh oo adduunka ka jira, xaqiiqdiina New York kuma yara. Waxa kaliya ee yaraaday waa tirada dadka diyaar u ah inay si daacad ah u sheegaan sheekooyinkooda.
Haddii aad diyaar u tahay oo aad awooddo inaad muujiso sheekadaada murugada iyo dhalanteedka ah, waxaa jira mareegaha iyo shirkado diyaar u ah inay lacag caddaan ah kugu siiyaan.
Awooddaada inaad dadka ka dhigto inay la wadaagaan waayo -aragnimadaada ayaa ah waxa awood u leh inaad jeebkaaga geliso $ 200 iyo wixii ka sareeya.
#6 - Noqo boodh
Qaar ka mid ah shirkadaha New York (NYC) waxay dareemayaan inay kuu fududahay inaad ku dhex dhaqaaqdo xayeysiisyadooda sidaas darteedna waxay jeclaan karaan inay ku iibsadaan booskan shaarkaaga ama baabuurkaaga si ay u suuqgeeyaan alaabtooda.
Wixii aad adigu naftaada iyo baabuurtaada u samaysid ka dib, miyaadan u malayn inay raadiyaan hab ay kuugu soo celiyaan?
Maxaad uga tanaasuli weyday booskan bilaashka ah ee gaarigaaga oo aad ku soo celisaa xoogaa lacag ah.
#7 - Bixi pizza
Waxaad lacag ka samayn kartaa New York (NYC) adiga oo gaarsiiya baastada dadka u baahan baastadaas. Bixinta Pizza-ku waa ikhtiyaar lacag samaynta oo jeebkaaga gelisa lacag intaad sii waddo kobcinta iyo sugidda shaqooyinka mushaharkoodu fiican yahay.
Blog -gu weli waa mid aad loo jecel yahay. Haddii aad heli karto raadadkaaga oo aad adigu naftaada ku qorto baloogga qof ama aad adigu naftaada yeelato, markaa fursadaha ayaa ah inaad u socoto lacag wanaagsan.
#9 - Muusikada
Magaaladan oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo leh nolol iyo hawl badan, waxaa jira ikhtiyaar ah in muusig la sameeyo.
Haddii muusiggu yahay wax aad jeceshahay inaad samayso, markaa waxaad xoogaa xoogaa lacag ah samayn kartaa intaad samaynayso.
Waxaa lagu siin karaa lacag si aad u ogaato aaladda ama aad barato ardayda cusub sida loo ciyaaro qalabka aad dooratay.
#10 - Noqo tababare shaqsiyeed
Tababare shaqsiyeed waa qof ka caawiya macaamiishooda inay gaaraan yoolalka jirdhiska qaarkood, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn miisaanka oo yaraada, tababarka xoogga, toning, ama maareynta caafimaadka guud.
Heerka jirdhis ee macmiil kasta aad buu u kala duwanaan karaa, sidaa darteed tababaraha ayaa laga yaabaa inuu hal macmiil u soo bandhigo laylisyada asaasiga ah, isagoo ka caawinaya midka labaad oo leh barnaamij miisaan dhimis ah, iyo caawinta saddexaad ee ahdaafta tababarka sare.
Waxaa jira lacag laga kasbado noqoshada tababare shaqsiyeed.
#11 - Abaabul riwaayadaha bannaanka
Riwaayaddu waa bandhig muusig oo toos ah dhagaystayaasha hortooda. Wax -qabadku wuxuu noqon karaa hal jilaa ama jilaayaal badan.
Haddii aad ku guulaysato isku -dubarididda tan, waxaad lacag ka samayn kartaa iibinta tigidhada elektaroonigga ah, adiga oo bixinaya badeecado. Abaabulka riwaayado dibadeed waxay noqon kartaa fursad lagu soo bandhigo fannaaniin cusub ama kooxo leh taageerayaal aad u yar dhagaystayaal kasta.
Marka hore, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad hesho lacagta aad rabto, laakiin waqtiga ayaa ka imanaya hawlgal, iyo ka -qaybgalku wuxuu yimaadaa lacag.
#12 - Tag oo raac
Tani waa fursad dhab ahaantii aan la faafin oo lacag lagu kasbado. Dalxiisayaasha qaarkood oo laga yaabo inay u baahdaan inay booqdaan meelaha qadiimiga ah qaarkood waxay u baahan yihiin qaar ka mid ah dadka deegaanka inay raacaan.
Calaamadeyntaani had iyo jeer waxay la socotaa xoogaa abaalmarin lacageed ah. Mararka qaarkood adiga oo ku dhejinaya, waxaad u dhaqmi kartaa sidii hage bixinaya caawimaad iyo macluumaad ku saabsan hiddaha dhaqanka, taariikheed, iyo kuwa casriga ah kuwa aan garanayn waxay arki karaan.
#13 - Lacag ku qaad xafladda
Waxaa jira fursado loogu talogalay gabdhaha dhallinyarada ah iyo ragga dhallinyarada ah ee xoogga u leh xafladda oo lacag lagu siiyo inay sidaas sameeyaan.
Mararka qaarkood dhallinyaradan rag iyo dumarba waa la shaqaaleeyaa si ay u rogaan dadka soo booqda baararka habeenkii kuwa caadiga ah. Xiliyada kala-wareegga, mas'uuliyadaha waxaa ka mid ah sawiridda macmiisha, ururinta macluumaadka xiriirka macmiilka ee raffles-saacadda farxadda leh, labbiska habeennada dulucda, bixinta wax-bixinta, ama bixinta macluumaadka ballan-qaadyada xafladda gaarka ah.
#14 - Turjum
Ma ku hadashaa luqad aysan dad badani ku hadlin? Markaa tani waxay kuu noqon kartaa fursad aad lacag ku kasbato, maadaama adeegyada qaar ay siiyaan macaamiisha turjumaad ama aad rabto inaad la xiriirto dadka ku hadla luqad isku mid ah oo aad diyaar u tahay inaad tan ku bixiso.
#15 - Noqo tijaabiye toy
Shirkadaha qaarkood ee sameeya alaabta carruurtu ku ciyaarto waxay diyaar u yihiin inay lacag siiyaan dadka si ay u tijaabiyaan alaabta carruurtu ku ciyaarto si ay u hubiyaan inaysan khaldamin.
Bixinta dadka si ay u tijaabiyaan alaabta carruurtu ku ciyaarto waa in la hubiyo in tiro aad u yar oo ka mid ah alaabta carruurtu ku ciyaarto ay ku soo laabtaan shirkadda ka dib markii la diray. Tijaabinta alaabta carruurtu waxay noqon kartaa shaqo maadaama ay tahay inaad maamusho tiro aad u badan oo alaabta carruurtu ku ciyaarto maalin walba.
#16 - Lacag ku bixi waxaad taqaan
Dadka qaarkood oo laga yaabo inay dareemaan inay yaqaaniin inay ku faanaan, kuma filna. Yaanay ku dhammaanayn xuquuqda faanka. Lacag ku bixi waxaad taqaan.
Waxaa jira tartamo faa’ido leh oo bixiya ilaa $ 200 iyo $ 100 marka aad guuleysato. Tartamadaani sidoo kale waa kuwo adag.
#17 - Lacag ku seexo
Haddii aadan indhahaaga furan karin maalintii ama aadan seexan karin habeenkii, hurdada waa mowduuc aad looga hadal hayo dunida daraasaadka cilmi -baarista ee mushaarka leh.
Machadyada cilmi -baarista iyo mararka qaarkood shaqsiyaadka ayaa diyaar u ah inay ku siiyaan lacag caafimaad leh si aad u seexato. Baadhitaanka intarneedka waa inuu muujiyaa liiska hay'adaha cilmi -baarista oo leh boosas furan.
#18 - Majaajilada istaag
Inkastoo tani aysan sahlanayn in la galo, waa bilow waxayna si fiican u shaqeyn doontaa dhamaadka haddii aad awoodo inaad naftaada soo gasho albaabka.
Furaha ayaa ah inaad dadka ka qosliso, oo haddii aad taas samayn karto adiga oo dhammaantood wejiga ka eegaya, markaa waxaad awoodi kartaa inaad naftaada u samayso xoogaa lacag aad u fiican.
#19 - Soo qaado qashinka
Dadka qaar oo laga yaabo inay ogaadaan qaadista qashinka shaqo aad u dhib badan ayaa weli la badbaadin karaa. Haa, waad badbaadisay. Waxaad caawin kartaa kuwa hela qashinka oo lacag laga qaado.
Haddii ay yihiin kuwo dib loo isticmaali karo oo aad maareyn kartid inaad dhaqaajiso oo aad qashinkan ka beddesho hal foom una beddesho foom kale oo faa'iido leh, markaa taasi waa lacag dheeraad ah adiga.
#20 - Iibi farshaxankaaga
Haddii aad xirfad u leedahay wax ku samaynta gacantaada oo ay tahay wax ay dadku dan u leeyihiin oo kugu filan si ay kaaga bixiyaan gacmahaaga, markaa waxaa laga yaabaa inaad naftaada u leedahay dakhli dakhli.
#21 - Faallooyinka
Markaad buuxiso dib -u -eegista, waxaad heli kartaa dakhli joogto ah oo laga yaabo inaad waligaa ka bixin qolkaaga NYC. Dib -u -eegiddu waa khayraad wanaagsan iyo il dakhli haddii si fiican loo qabto.
Shirkadaha fahamsan muhiimada dib u eegista macmiilka ayaa diyaar u ah inay macaamiisha siiyaan jawaab celin taas oo ka caawin doonta inay koraan. In kasta oo tani ay noqon karto wax laga yaqyaqsoodo, waxay ku caawinaysaa shirkadda iyo adiga labadaba.
NYC oo ah hoyga fursadaha ayaa leh fursado badan oo lacag lagu kasbado intii macquul ahaan macquul ku noqon lahayd baloogga sidan oo kale ah. Fududeynta qof walba waa lacag qof. Bixinta badeecooyin iyo adeeg la awoodi karo oo dadka agagaarkaaga u dhow ay u baahan yihiin ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee koritaanka.
Faallooyinka Canshuur -qaadaha 2022: Faylka Canshuuraha ee ugu Fiican Online ama Fadeexad
Waxa lagu sameeyo Warqad la jeexay: 22 Fikradaha Hal -abuurka ah
Waa tagay maalmihii ay ciyaartu waqti lumis ahayd. Hadda, waxaad samayn kartaa inta lacag ah…
Waxaan ku dabaqay hal xirfad oo kaliya 35 siyaabood oo la hubo oo aan ku kasbado oo aan ku helo 200 doollar dhakhso…